Fanitsakitsahana ny fahatokisana any Emirà Arabo Mitambatra: Ny hosoka sy ny fanitsakitsahana ny fitokisana dia heloka bevava any UAE
Ny hosoka sy ny fanitsakitsahana ny fahatokisana dia heloka bevava any UAE
Fanitsakitsahana ny fahatokisana any UAE
Ankoatra ny famporisihana ara-barotra lehibe, ao anatin'izany ny fidiram-bola tsy misy hetra, ny toerana afovoany ao amin'ny United Arab Emirates (UAE) sy ny akaikin'ny tsena iraisam-pirenena lehibe dia mahatonga azy io ho toerana mahafinaritra ho an'ny varotra eran-tany. Ny toetr'andro mafana ao amin'ny firenena sy ny fitomboan'ny toe-karena dia mahasarika ny mpifindra monina, indrindra fa ny mpiasa any ivelany. Raha ny marina, ny UAE dia tanin'ny fahafahana.
Na izany aza, ny maha-tokana an'i Emirà Arabo Mitambatra amin'ny maha-toeran'ny fandraharahana lehibe sy ny fari-piainana tsara dia tsy vitan'ny hoe nahasarika olona miasa mafy avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao fa mpanao heloka bevava ihany koa. Avy amin'ny mpiasa tsy marin-toetra ka hatramin'ny mpiara-miasa tsy marina, mpamatsy ary mpiara-miasa hafa, ny fanitsakitsahana ny fahatokisana dia lasa heloka bevava mahazatra any UAE.
Inona no atao hoe Breach of Trust?
Ny hosoka sy ny fanitsakitsahana ny heloka bevava dia heloka bevava any UAE eo ambany Lalàna Federaly laharana faha-3 tamin’ny 1987 sy ny fanitsiana azy (ny fehezan-dalàna famaizana). Araka ny andininy faha-404 ao amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana Emirà Arabo Mitambatra, ny fandikana ny lalàna momba ny fitokisana dia misy fandikan-dalàna amin'ny fanodikodinana fananana azo mihetsika, anisan'izany ny vola.
Amin'ny ankapobeny, ny fanitsakitsahana heloka bevava dia ahitana toe-javatra iray izay ametrahan'ny olona iray amin'ny toeran'ny fitokisana sy ny andraikitra manararaotra ny toerany amin'ny fanodikodinana ny fananan'ny tale. Eo amin'ny sehatry ny fandraharahana, matetika dia mpiasa, mpiara-miombon'antoka, na mpamatsy / mpivarotra ny mpanao heloka bevava, fa ny niharam-boina (ny tale) dia matetika tompona orinasa, mpampiasa, na mpiara-miasa.
Ny lalàna federaly ao Emirà Arabo Mitambatra dia mamela na iza na iza, anisan'izany ny mpampiasa sy ny mpiara-miombon'antoka iharan'ny fanodinkodinam-bola ataon'ny mpiasany na ny mpiara-miombon'antoka aminy, hitory ireo mpandika lalàna amin'ny raharaha heloka bevava. Fanampin'izany, ny lalàna dia mamela azy ireo hamerina ny onitra avy amin'ny meloka amin'ny alàlan'ny fametrahana ny raharaha eny amin'ny fitsarana sivily.
Fepetra momba ny raharaha heloka bevava fanitsakitsahana ny fitokisana
Na dia mamela ny olona hitory ny hafa noho ny fandikana ny fitokisana aza ny lalàna, dia tsy maintsy mahafeno fepetra na fepetra sasany ny raharaha fanitsakitsahana ny fitokisana: anisan'izany ny:
Ny fanitsakitsahana ny fahatokisana dia mety hitranga raha tsy misy ny fanodinkodinana fananana azo afindra, ao anatin'izany ny vola, ny antontan-taratasy ary ny fitaovana ara-bola toy ny ampahany na fatorana.
Mitranga ny fanitsakitsahana ny fitokisana rehefa tsy manana zo ara-dalàna amin'ny fananana ampangaina ho nanodinkodina na fanodinkodinana ny voampanga. Amin'ny ankapobeny, tsy manana fahefana ara-dalàna ny mpanao heloka bevava hanao zavatra toy ny nataony.
Tsy toy ny halatra sy ny hosoka, ny fanitsakitsahana ny fahatokisana dia mitaky onitra ny niharam-boina.
Mba hisian'ny fanitsakitsahana ny fitokisana, ny voampanga dia tsy maintsy manana ny fananana amin'ny iray amin'ireto fomba manaraka ireto: ho fanofana, fitokisana, fampindramam-bola, na proxy.
Amin'ny fifandraisana amin'ny petra-bola, ny tompona petra-bola izay mandrara ny tompon'andraikitra hafa tsy hampihatra ny zony ara-dalàna amin'ny anjarany ary maka ireo anjara ireo ho tombontsoany dia azo enjehina noho ny fanitsakitsahana ny fitokisana.
Fanitsakitsahana ny sazy azo antoka ao UAE
Mba hisakanana ny olona tsy hanao fandikan-dalàna amin'ny fitokisana, ny lalàna federaly Emira Arabo Mitambatra dia manameloka ny fanitsakitsahana ny fitokisana araka ny Andininy 404 ao amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana. Araka izany, fandikan-dalàna ny fanitsakitsahana ny fitokiana, ary izay rehetra hita fa meloka dia iharan'ny:
Sazy an-tranomaizina (figadrana), na
Na izany aza, ny fitsarana dia manana ny fahalalahana mamaritra ny halavan'ny fatorana na ny habetsaky ny lamandy fa araka ny voalazan'ny fehezan-dalàna famaizana. Na dia afaka mamoaka sazy araka ny hamafin'ny fandikan-dalàna aza ny fitsarana, ny andininy faha-71 amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana Federaly laharana faha-3 amin'ny 1987 dia mamaritra ny fandoavana onitra AED 30,000 sy sazy an-tranomaizina tsy mihoatra ny telo taona.
Fanitsakitsahana ny Lalàm-pitokisana UAE: Fiovana ara-teknolojia
Tahaka ny faritra hafa, ny teknolojia vaovao dia nanova ny fomba fanenjehan'ny UAE ny raharaha fanitsakitsahana ny fitokisana. Ohatra, amin'ny toe-javatra izay nampiasan'ny mpandika teny solosaina na fitaovana elektronika hanaovana ny heloka bevava, ny fitsarana dia afaka manenjika azy ireo araka ny Lalàna momba ny heloka bevava an-tserasera UAE (Lalàna Federaly laharana faha-5 amin'ny 2012).
Ny fanitsakitsahana ny fitokisana araka ny Lalàna Cyber ​​Crime dia mitondra sazy henjana kokoa noho ireo enjehina araka ny fepetra voalazan'ny Fehezan-dalàna famaizana. Ny heloka bevava eo ambanin'ny Lalàna momba ny heloka bevava amin'ny Cyber ​​​​dia ahitana ireto manaraka ireto:
Famoahana antontan-taratasy mampiasa fitaovana elektronika/teknolojia
Fampiasana iniana taratasy elektronika hosoka
Mampiasa fomba elektronika/teknolojia hahazoana fananana tsy ara-dalàna
Fidirana tsy ara-dalàna amin'ny kaonty amin'ny banky amin'ny alàlan'ny fomba elektronika/teknolojia
Fidirana tsy nahazoana alalana amin'ny rafitra elektronika/teknolojia, indrindra any am-piasana
Ny tranga mahazatra amin'ny fanitsakitsahana ny fahatokisana amin'ny alàlan'ny teknolojia any UAE dia ahitana ny fidirana tsy nahazoana alalana amin'ny kaonty na banky an'ny olona na fikambanana iray mba handefasana vola amin'ny hosoka na hangalatra amin'izy ireo.
Ny Emirà Arabo Mitambatra dia tanin'ny fahafahana ho an'ny olona maro, anisan'izany ny mpanao heloka bevava. Na dia mahatonga ny fanitsakitsahana ny fitokisana ho mahazatra aza ny toerana tsy manam-paharoa ao amin'ny firenena, ny Fehezan-dalàna famaizana ao Emirà Arabo Mitambatra sy ireo fepetra maro hafa ao amin'ny Lalàna Federaly dia nahomby tamin'ny fiatrehana ireo heloka bevava ireo. Na izany aza, amin'ny maha niharam-boina anao na voampanga ho mpandika lalàna amin'ny raharaha fanitsakitsahana ny fitokisana, mila mpisolovava mpiaro ny heloka bevava mahay ianao hanampy anao hivezivezy amin'ny dingana ara-dalàna matetika sarotra.
Manofa mpanolo-tsaina ara-dalàna efa za-draharaha sy matihanina any Dubai
Raha miahiahy ianao fa nisy fanitsakitsahana ny fifampitokisana, dia tsara ny mangataka torohevitra amin'ny a mpisolovava heloka bevava any UAE. Iray amin'ireo orinasa mpanao lalàna momba ny heloka bevava any UAE izahay izay miatrika ny fanitsakitsahana ny lalàna momba ny fitokisana.
Rehefa manakarama ny orinasanay mpisolovava izahay hisolo tena anao amin'ny raharaha fanitsakitsahana ny fitokisana, dia hataonay antoka fa hohenoin'ny fitsarana ny raharahanao ary ho voaro ny zonao. Ny mpisolovava amin'ny fanitsakitsahana ny fahatokisana any Dubai, UAE dia hanome anao ny fanampiana rehetra ilainao. Azonay ny maha zava-dehibe ny raharahanao aminao, ary manao izay tratry ny herinay izahay mba hiarovana ny zonao sy ny tombontsoanao. Mifandraisa aminay anio!
Antsoy izahay izao mba handraisana fotoana sy hifampidinika amin'ny Lalàna momba ny varotra/orinasa manokana sy ny mpisolovava amin'ny heloka bevava amin'ny +971506531334 +971558018669